असफलताबाट उठेर कसरी अगाडी बढ्ने ? जान्रुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
असफलता या सफलता, कुनै पनि जिन्दगीकाेे अन्त्य हाेइन । सफलता र असफलता त जिवनकाे एउटा यात्रा हाे । जिवनमा कयाैँ परिक्षाहरू हुन्छन्, तिनै परिक्षाकाे नतिजाले हामीलाइ थप अनुभवी, अात्मनिर्भर र बलायाे बनाउँदै लैजान्न् ।विभिन्न अनुसन्धानहरूकाे नतिजाले पनि याे बताउँछ कि एक्लै अाफैसँग बाेल्ने व्यक्ति बढि सकरात्मक र उत्प्रेरित रहत सक्छ ।
यसकाे लागी अाफैले अाफैसँग सकारात्मक कुरा गर्नुपर्छ । साइकाेथेरापिस्ट तथा लेखकाे रूपमा प्रसिद्द अमेरिकाकी लिजा फ्रेँजका अनुसार, असफल भए भन्रे साेच अाएकाे छ भने अाफ्ना बलियाे पक्षहरू, त्याे परिस्थितिले ल्याउन सक्ने सकारात्मक कुराहरू, अाफ्ना सपनाहरू अादी सकारात्मक उर्जा दिने कुरा पेपरमा लेख्नुपर्छ ।
त्यसपछी एना अगाडी उभिएर ति कुराहरू बाहिर अावाज अाउने गरी जाेडले भन्नुपर्छ । अाफुसँग ति बारेमा कुरा गर्दै एना अगाडी केही समय बताउनुपर्छ र अाफुलाइ हेरेर मुस्कुराउनुपर्छ ।सफल व्यवसायी तथा विश्वकै सबैभन्दा धनी व्याक्तिकाे रूपमा परिचित जेफ बेजसका अनुसार, उनले एउटा प्रसिद्द तथा प्रेरक भनाइलाइ पेपरमा लेखेर अाफ्नाे रेफ्रिज्रेटरमा टागेका छन् ।
जतिबेला उनि फ्रिज खाेल्न जान्छन्, त्याे भनाइमा अाँखा जान्छन् र थकित भएकाे अवस्थामा पनि उनकाे दिमाग ताजा र सकारात्मक बन्छ । त्यसैगरी तपाइले पनि अाफुलाइ मन परेकाे र प्रेरित गर्ने किसिमका भनाइ अाफ्नाे अाँखा गइरहने ठाउँमा लखेर राख्नुहाेस् । यसले तपाइमा सकारात्मक साेच र नयाँ अाशा ल्याइदिन्छ ।
तपाइ के कुरामा र कसरी असफल हुनुभयाे, विश्लेषण गर्नुहाेस् । के, कसरी, कहाँ भन्ने कुराहरूकाे उत्तर खाेज्नुभयाे भने तपाइले त्यहाँ असफलताकाे कारण भेट्न सक्नुहुनेछ । र, त्याे नै तपाइकाे अर्काे प्रयासकाे लागी महत्वपुर्ण पाठ बन्र सक्छ । त्यसपछी तपाइले के गरेकाे भए त्याे असफलताकाे सम्भावना नरहन सक्थ्याे भन्रे साेच्नुहाेस् ।
यसले तपाइमा अबका दिनकाे लागी सिकाइ पैदा गरिदिने छ । जसले गर्दा तपाइमा अात्मविश्वास र ज्ञान बढ्नेछ ।सेमिनारहरूमा सहभागी हुनुहाेस् । नयाँ कुराहरू खाेजेर सिक्ने प्रयास गर्नुहाेस् । अाफ्नाे रूचिकाे क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी खाेज्नुहाेस् । अग्रजबाट सल्लाह लिनुहाेस् । अाफ्नाे त्याे असफलताकाे अनुभव र नयाँ ज्ञानलाइ नयाँ याेजनाकाे अाधार बनाउनुहाेस् ।
नयाँ याेजनालाइ कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्रे साेच्नुहाेस् र त्यसकाे लागी साना-साना याेजना बनाउँदै काम सुरू गर्नुहाेस् । जब काम गर्न थाल्नुहुन्छ, निराशा र डर हट्दै जान्छ । फेरी नयाँ अाशा जन्मिन थाल्छ । पुस्तक पढ्ने, प्रेरक जिवनी तथा अन्य प्रेरक सामाग्री पढ्ने, सँगित सुन्रे, नाच्ने, अाफ्नाे लुक्समा केही परिवर्तन ल्याउने, घुम्न जाने अादी गर्नाले तपाइमा थप उर्जा बढ्नेछ ।
कहिलेकाही त्यही असफलतामा मात्र अाफ्नाे दिमाग जाने, अरू केही गर्न नसक्ने हुनसक्छ । यस्ताे अवस्थामा अाफ्नाे नजिककाे साथीसँग, परिवारका सदस्यसँग खुलेर अाफ्ना कुरा राख्नुहाेस्, उनिहरूकाे सुझाव लिनुहाेस् । अाफ्ना मनमा लागेका कुराहरू डायरीमा लेख्नुहाेस् । धेरै लामाे समय सम्म पनि निराशाबाट निस्कन सक्नु भएन भने मनाेवैज्ञानिक कहाँ गएर परामर्श लिनुहाेस् ।
प्रतिस्पर्धी भन्दा एक कदम अगाडी कसरी हुने? (६ टिप्सहरु)
यदि तपाईँले गरिरहनु भएको जस्तै व्यवसाय अरूले पनि गरिरहेका छन्, वा तपाईँले दिई रहनु भएको सेवा अरूले पनि दिई रहेका छन् भने तिनीहरूलाई तपाईँको प्रतिस्पर्धीहरूका रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तै: तपाईँ बच्चाले लगाउने कपडाको व्यवसाय गर्नु हुन्छ भने तपाईँको पसल भएको ठाउँमा नजिकै अर्को बच्चाले लगाउने कपडा बेच्ने व्यवसाय छ भने त्यो तपाईँको प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ।
तपाईँको व्यवसाय बजारमा भएका अन्य प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा फरक र अझ राम्रो हुन सकेन भने ग्राहकले तपाईकोमा नकिन्न सक्छन्। त्यसैले एउटा सफल व्यवसायी बन्नको लागि तपाईँले बजारमा भएका अरू व्यवसायले भन्दा फरक कस्तो सेवा/सुविधा दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा सधैँ चनाखो हुन जरुरी छ। तपाईँको व्यवसाय प्रतिस्पर्धीको भन्दा समयमै राम्रो र फरक बन्न सकेन भने भविष्यमा ठुलो घाटा पर्न सक्छ ।
प्रतिस्पर्धीको कमीकमजोरीलाई याद गर्ने
प्रतिस्पर्धीको व्यवसायलाई नियमित रूपमा आफ्नोसँग तुलना गर्न आवश्यक हुन्छ। यसो गर्नाले तपाईँले प्रतिस्पर्धीका कमीकमजोरीहरू पहिल्याइ यी कमजोरीहरू पुरा गर्न सक्ने सेवाहरू ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै: तपाईँको नजिकैको कपडा पसलमा अन्य कपडाहरू छन् तर साडी बेच्ने गरेको छैन भने तपाईँले साडीहरू राखी बढी ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
हुनसक्छ तपाईँको प्रतिस्पर्धीले गुणस्तरीय समान बेच्दैनन्, महँगो बेच्दै आइरहेका छन्, मीठो बोली गर्दैनन् र काममा ढिलासुस्ती गर्छन् भने तपाईँले यी कमजोरीहरू पुरा गरी सजिलै ग्राहक बनाउन सक्नुहुन्छ।
मूल्य सस्तो गर्ने उपाय खोज्ने
तपाईँले राम्रो गुणस्तर भएको समान सस्तो मूल्यमा उत्पादन गरी अन्य प्रतिस्पर्धीले भन्दा धेरै ग्राहकहरू तान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै: बजारमा नयाँ मोडलका र कम बिजुली खपत हुने मेसिनहरू आइसकेका छन् र त्यी मेसिनहरूले थोरै बिजुली खपत गर्छन्। तर तपाईका प्रतिस्पर्धीले पुरानो मोडेलको मेसिन प्रयोग गर्दै आएका छन् भने तपाईँले नयाँ मोडेलको मेसिन राख्न सक्नुहुन्छ।
यसरी थोरै बिजुलीमा नै तपाईँले धेरै सामान उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले आधुनिक प्रविधि र सिपालु कामदारहरूबाट सस्तो लागतमा गुणस्तरीय पस्मिनाको सलहरु उत्पादन गर्न सक्नु भयो भने सस्तो मूल्यमा नै बजारमा बेच्न सक्नुहुन्छ। यसरी सस्तोमा उत्पादन गरेको सामान बजारमा प्रतिस्पर्धीको भन्दा सस्तो मूल्यमा बेच्न सकिन्छ।
ग्राहकहरूको समस्या बुझी समाधान गर्ने
व्यवसायीले सदैव आफ्ना ग्राहकहरूले कस्ता सामान खोजिरहेका छन् भन्ने कुराको ज्ञान राख्नु पर्छ। तपाईँले दिइरहेको र ग्राहकले खोजिरहेको सामान मिलिरहेको छैन भने समयमा नै उनीहरूको रोजाई तथा खोजाइ अनुसारको सामान उपलब्ध गराउनु पर्छ।
ग्राहकहरूको समस्या बुझी त्यसको समाधान गर्ने व्यापारी आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा अघि हुने सम्भावना बढी हुन्छ। जस्तै: तपाईँको प्रतिस्पर्धीले होम डेलिभरीको सुविधा दिँदै आएको छैन भने तपाईँले त्यो सुविधा दिएर ग्राहकहरूलाई सहज बनाइदिन सक्नुहुन्छ।
नयाँ चिजको उत्पादन गर्ने
आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू धेरै भए र तपाइको सामान कम मात्रामा बिक्री हुन थाल्यो। त्यस्तै त्यस सामानको मूल्य पनि घट्यो र आफूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भयो। यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यसै सामानबाट नौलो सामानको उत्पादन गरी बजारमा नयाँ स्थान लिन सक्नुहुन्छ।
जस्तै: तपाईँको लप्सीबाट अचार बनाउने व्यवसाय छ तर अचारको माग कम हुँदै गयो भने तपाईँले लप्सीबाट अचार बनाउन छोडी त्यसको क्यान्डी बनाउने प्रविधि पत्ता लगाई बनाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
विश्वसनीयता कायम गर्ने
आफ्ना ग्राहकहरूलाई दिगो बनाउन तपाईँ एक विश्वासिलो व्यापारी हुन सक्नुपर्छ। समयमै काम गर्ने, सामानका बारेमा जानकारी दिने, गुणस्तरमा ध्यान दिने,आफ्ना गल्तीलाई स्विकार्ने जस्ता कुराहरू आफूले सधैँ गरिरहनु पर्छ।
सबैजनाले यस्ता कुराहरूलाई ख्याल गरिरहेका हुँदैनन् तर तपाईँले आफ्ना प्रतिस्पर्धीबिच बसेरै पनि यसरी ग्राहकहरूमा आफूप्रतिको विश्वास बढाउन सक्नुहुन्छ। अझ मीठो बोलीले ग्राहक दिगो बनाउन थप सहयोग गर्छ।
व्यवसायमा छिटो आम्दानी गर्ने प्रक्रियाहरू मध्ये अफर पनि एउटा हो। आफ्ना सँगैका व्यापारीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो पर्दा विभिन्न आकर्षक अफरहरू राखी ग्राहकहरू तान्न सकिन्छ।
जस्तै: तिन वटा स्याम्पु किन्दा एउटा साबुन सित्तैमा, २ वटा मन्जन किने एउटा ब्रस सित्तैमा र ५ प्लेट म:म खाँदा १ प्लेट सित्तैमा। यस्ता अफरहरूले ग्राहकहरू फर्केर फेरी आउने गर्छन् र सामान पनि बढी मात्रामा बिक्छ।
Up Next पेस्ता सेवन गर्नाले हुने अद्भूत फाइदाहरु जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, जान्नुहोस् के रहेछ त ?